सरकार फेरि मन्त्रालय फुटाउँदै, राजनीतिक भागबण्डा कि भारतीय स्वार्थ ! - UrjaKhabar सरकार फेरि मन्त्रालय फुटाउँदै, राजनीतिक भागबण्डा कि भारतीय स्वार्थ ! - UrjaKhabar
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने चर्चा बाहिर आएसँगै केही मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी थालिएको छ । नेताहरूलाई मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भन्दै मन्त्रालय टुक्र्याउन लागिएको हो ।
टुक्रिने मुख्य मन्त्रालयहरूमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात परेका छन् । केही महिनाअघि देखि नै मन्त्रीहरू फेर्ने र नयाँलाई जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले पनि बताउँदै आएका छन् ।
ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय टुक्र्याउने विषयमा भने मन्त्री वर्षमान पुनले असहमति जनाएका छन् । आयोजना निर्माण र अनुगमनले गति लिइरहेको र ऊर्जा तथा जलस्रोत एकअर्कामा गाँसिएको हुँदा फुटाउन नहुने उनको धारणा रहेको छ ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री भने नेतालाई भाग पुर्याउनका लागि फुटाउनैपर्ने भन्नेमा छन् । मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने मनसाय नभए पनि भागबण्डा मिलाउन त्यसो गर्नैपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पुनलाई बोलाएर अवगत गराएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘मेरो कुनै मनसाय छैन तर काम गर्न वा मिलाएर जान मन्त्रालय टुक्र्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि मनस्थिति बनाउनु होला भनेर मन्त्रीलाई भनिएको छ ।’ मन्त्री भने फुटाउन नहुने अडानमै देखिएका छन् ।
तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधामन्त्री भएपछि सत्ता साझेदार दलसँग भागबण्डा मिलाउन तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय फुटाएर ऊर्जा र सिँचाइ बनाएका थिए । यसपछि, ओली दोस्रो पटक २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि केही मन्त्रालय गाभेर साना आकारको बनाइएको थियो ।
मन्त्रालय एउटै बनाइए पनि अहिलेसम्म सचिव भने दुई जना छन् । एउटा मन्त्रालयमा एउटै सचिवको व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । ऊर्जा (दिनेशकुमार घिमिरे) र सिँचाइ (रबिन्द्रनाथ श्रेष्ठ) छुट्ट्याएर सचिव राखेपछि फुटाउन खोज्ने, फुटाउने र दबाब दिनेलाई बल पुगेको छ ।
तत्कालीन एमालेकै पालमा टुक्रिएको मन्त्रालय उनकै नेताले जोडे र फेरि फुटाउने तयारीमा छन् । ओली सरकारले सुरुमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय नामांकरण गरेको थियो । पछि फेरि ऊर्जा, जल्रोतत तथा सिँचाइ बनाइयो । अब ऊर्जा र जलस्रोत तथा सिँचाइ बनाउने बताइएको छ ।
देश संघीयतामा गएपछि थोरै मन्त्रालय राख्ने प्रायः सबै राजनीतिक दलले बाचा गरेका थिए । सोही बाचा अनुसार ३१ मन्त्रालय गाभेर १८ बनाइएको थियो । अब फेरि मन्त्रालयको संख्या २५ पुर्याइँदैछ । सरकार पुनः पुरानै ढाँचा वा ढर्रामा जाने देखिएको छ ।
मन्त्रालय टुक्रिनुमा नेपालभित्र सरकार र राजनीतिक दलको प्रयास मात्र नभएर भारतीय चासो समेत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । भारत नेपालबाट बिजुली लैजाने भन्दा पनि पानीमाथि हैकम जमाउने योजनामा छ । यही कारण पनि ऊर्जा र जलस्रोतलाई दुईटा बनाउनुपर्नेमा दबाब दिँदै पनि आएको छ ।
भारतमा विद्युत् तथा ऊर्जा र जलस्रोत हेर्ने फरक–फरक मन्त्रालय छन् । यसो हुँदा पानी र ऊर्जालाई मिसाउन नहुने भारतीय अधिकारीहरूले बेलाबेला तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरू फरक मन्त्रालय हुँदा दुई देशका विषयमा त्यसरी छलफल तथा वार्ता गर्न सहज हुने धारणा राख्छन् ।
नेपालको हकमा भने ऊर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत पानी (जलस्रोत) नै भएकाले यसलाई अलग बनाएर जाँदा प्रभावकारी नतिजा आउन सक्दैन । एउटै आयोजनाबाट विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी लगायत विषय जोडिएको हुन्छ । यसो हुँदा पनि मन्त्रालय फुटाउनु निर्माणाधीन आयोजनालाई लथालिंग बनाउनु जस्तै हो ।